Libya - BBC News Somali
Ninkan ayaa lasoo badbaadiyay maalintii Isniinta
Colaadda Liibiya: Kooxaha dalkaas ku dirirayay oo ciidda ogolaaday xabbadjoojin
Hogaamiyaha fallaagada Jaranaal Khaliifa Xafrar ayaa waxa uu ballanqaaday inuu dagaalka joojin doono ilaa iyo Isniinta.
11 Agoosto 2019
"18 kun oo doollar ayaa iiga baxday go'aan aan naftayda khatar ku geliyey"
Weli waxaa Liibiya ku sugan dhallinyaro dooneysa in ay naftooda badda ku biimeeyaan si ay Yurub u gaaraan, iyadoo dhowaan ay 150 qof ku dhinteen.
30 Luulyo 2019
Dhakhaatiir ku le'day duqaymo ka dhacay Libya
150 qof ku dhimatay Doon ku degtay xeebaha Liibiya
Dad gaaraya 150 qof ayaa ku qaraqmay xeebaha dalka Liibiya,sida ay sheegtay hay'adda qaxootiga aduunka ee UNHCR.
Faransiiska ayaa sheegay in gantaallada laga helay waddanka Liibiya lagu waday in dhawaan la burburiyo cid laga gadayna ma ay jirto.
Ciidamada dowlada Liibiya oo la wareegay magaalo muhim ah
Dowlada Liibiya ee ay caalamka aqoonsan yihiin ayaa sheegtay in ay ciidamadeeda dib ula wareegeen magaalada istaraatijiga ah ee Gharyan ka dib dagaal ay la galeen ciidamada mucaaradka.
Toddobo Jaantus : Carabta ma dhabarka ayay u jeedinayaan diinta?
Tiro sii kordhaysa oo ah dadka Carabta ah eeku nool Bariga Dhexe ayaa sheegay in aysan diinta ku dhaqmin si lagu ogaaday daraasado la sameeyay.
25 Juunyo 2019
Rai'sul wasaaraha Liibiya oo dhaliil u soo jeediyay beesha caalamka
Rai'sul wasaaraha dowladda ay Qaramada Midoobay ay taageerto ee Liibiya ayaa cambaareyn adag dusha uga tuuray beesha caalamka.
15 sano jir u soontay si uu dalkeeda nabad u noqdo
Gabar da'yar oo u dhalatay dalka Liibiya ayaa waxa ay bilowday olole ay ku rajo weyn tahay in nabad lagu gaarsiiyo guud ahaan dalka.
Maxaa sababay nidaam-darrada ka jirta dalka Liibiya?
Dalka Liibiya ayay xasarad ka aloosnayd tan iyo markii ciidamada ay taageerto gaashaanbuurta Nato ay xukunka ka tureen madaxweynaha muddada dheer dalkaasi ka talinayay ee Mucammar Al-Qadaafi, Oktoobar sanadkii 2011.
Dadka Soomaalida ah ee ku sugan Liibiya ayay talo ku ciirtay ka dib markii noloshii adkayd ee ay la daalaadhacayeen ay ugu darsantay colaadda dalkaas ka soo cusboonaatay.
Khalifa Haftar: Janaraal ka badbaaday Qadaafi hadana loo maara la'yahay
Beesha caalamka oo ku cambaareysay Xaftar dagaalka uu ku qabsanayo Tripoli
Ugu yaraan 21 qof ayaa ku dhimatay kuwa kalena waa ay ku dhaawacmeen dagaalkii afartii maalmood ee lasoo dhaafay ka soocnayay qeybo ka mid ah caasimada Libya, sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka ee dalkaasi.
Caalamka oo ku cambaareeyay General Xaftar dagaalka uu ku qabsanayo caasimada Libya
Dagaalka Libiya oo sii xoogeystay iyadoo ciidamada Xaftar ay Tripoli ku wajahan yihiin
Dagaalka ka soconaya nawaaxiga caasimada Tripoli ayaa sii xoogeystay , iyada oo wararku ay sheegayaan in ciidamo daacad u ah Gen Khalifa Haftar ay ka galeen magaalada saddex jiho.
7 Abriil 2019
Caalamka oo cambaareeyay dagaallada kasoo cusboonaaday Liibiya
Golaha ammaanka ee Qaramada Midoobey ayaa kulan degdeg ah ka yeeshay xaaladda dalkaasi iyadoo Liibiya ay ka socdaan iska hor-imaadyo xooggaan.
6 Abriil 2019
Janaraal Xaftar oo ciidamadiisa howlgaliyay iyo Tripoli oo heegan gashay
Xaaladdan cirka isugu shareertay ayaa kusoo aadday xilli uu Liibiya ku sugan yahay Xog hayaha guud ee Qaramada Midoobay
"Waxa laysku keen qaldaa waqtiga haasaawaha"
Warqaddii 50 sano ka hor la qoray ee hadda qabsatay warbaahinta Caalamka
Maalin kaliya ma lagu tallaali karaa 350 milyan oo geed?